iPhone သတင်းဘလော့ဂ်အကြောင်း | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Actualidad အိုင်ဖုန်းသည်စပိန်ဘာသာဖြင့်သင်ရှာဖွေမည့်ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖြစ်သည် အိုင်ဖုန်းနှင့်ပတ်သက်သောအကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်များ အက်ပလီကေးရှင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးမှသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများသို့မဟုတ်ဂိမ်းများ။ ကျနော်တို့နေ့စဉ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မယ် ပန်းသီးဖုန်းအကြောင်းသတင်းလုပ်ဖို့သင်ခန်းစာများ jailbreakiPhone ကိုသော့ဖွင့်ပါ (သို့) iOS ထဲကအကောင်းဆုံးကိုရယူပါ။ ငါတို့သည်လည်းသင်တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆောင်ခဲ့ရမည် iPhone ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ iPhone အတွက်ကိစ္စတွေ၊ ရပ်တွေ၊ စပီကာတွေ၊ Dock တွေနှင့်အခြားအရာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
Podcast 13 × 05: ကင်မရာ၊ ဘက်ထရီနှင့်မျက်နှာပြင်၊ iPhone ကိုပြောင်းရခြင်းအကြောင်းများ။
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
iPhone 13 နှင့် 13 Pro အသစ်အကြောင်းပထမဆုံးသုံးသပ်ချက်ကရှင်းပါတယ်၊ ပြောင်းလဲရသည့်အကြောင်းအရင်းများမှာ ...
Podcast 13 × 04: Apple Keynote၊ ဘာမျှမသဲကွဲ။
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
Apple ပွဲတွင်တင်ပြခဲ့သောအရာအားလုံးကိုချေဖျက်ရန် ၂၄ နာရီကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ကြေငြာထားသောသတင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၄ တွင် Podcast 13 × 03: Apple Event
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
Apple မှစက်တင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် iPhone 13 မိတ်ဆက်ပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြေငြာလိမ့်မည်။
Podcast 13 × 02: Apple Watch အသစ်၊ လွှမ်းခြုံမှုမပါဘဲပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် iPhone
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့4ရက်သတ္တပတ် .
ယခုအပတ်တွင်အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည့် Apple Watch သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်း၊ မျက်နှာပြင်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များအကြောင်းပေါက်ကြားမှုများရှိသည်။
Podcast 13 × 01: ငါတို့ပူတဲ့နွေရာသီကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ပြန်လာပြီ
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ လ .
Actualidad iPhone podcast ၏ ၁၃ ရာသီ၏ပထမအပိုင်း စကားပြောရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုက်ရိုက် podcast သို့ပြန်သွားသည်။
Podcast 12 × 37: Fried HomePods နှင့် privacy ပေးခြင်းပြproblemsနာများ
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
12 × 36 Podcast: AirPods, OLED နှင့် Betas
12 × 35 Podcast: Betas တစ်ပတ်
12 × 34 Podcast: WWDC 2021 ၏အဓိကသုံးသပ်ချက်
por Luis Padilla လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်း .
Podcast 12 × 33: WWDC 2021 မှကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာ
12 × 32 podcast: iPad Pro ကအများကြီးတန်ပါတယ်
iPhone 10 မှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ပြproblemsနာ ၁၀ ခုနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
Battery ပါဝါရှိနေချိန်မှာမင်းရဲ့ iPhone ကိုပိတ်ထားသလား။ ဒီမှာဖြေရှင်းချက်
iOS 10 တွင် Bluetooth ဆက်သွယ်မှုပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
Wiseplay၊ သင်၏မိုဘိုင်းပေါ်ရှိကမ္ဘာ့ရုပ်သံလိုင်းအားလုံး [သင်ခန်းစာ]
iOS နှင့် Android အတွက် All-in-One emulator ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့် Happy Chick ။ [Installation tutorial]
ငါ့ကိုဖုန်းခေါ်တဲ့အခါ iPhone ကို Flash ကိုမီးမောင်းထိုးပြပုံ
iPod Touch 6G အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဆန်းစစ်ပါသည်
သင်၏ဓါတ်ပုံများကို iPhone နှင့် iCloud တွင်အမြဲတမ်းမည်သို့ဖျက်မည်နည်း
ပျောက်သွားတဲ့ (သို့) အခိုးခံရတဲ့ iPhone ပိုင်ရှင်ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
iOS 7.1.2 ရှိအဆက်အသွယ်များကို iCloud နှင့်မည်သို့စည်းညှိမည်နည်း
Tutorial: iPhone ပေါ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများ၏ပထဝီဝင်နေရာချထားမှုကိုဖယ်ရှားရန်
သင်ခန်းစာ - iPhone မှကွန်ပျူတာသို့သင်၏အသံမှတ်စုများကိုမည်သို့လွှဲပြောင်းရမည်နည်း
သင်ခန်းစာ - တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်ကို 'ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကိုရှာပါ' တွင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကမည်သို့သိနိုင်သနည်း။